Dunuu Bareeda Qaba Erga Du’uun Hin Oolee – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDunuu Bareeda Qaba Erga Du’uun Hin Oolee
Damee Boruu: Fulbaana 20, 2020
Mana hidhaa Itoophiyaa
Sirni Impaayeera Itoophiyaa bu’ura irratti ijaaramee jiru nama Oromoo baayyeef waan galeef hin fakkaatu. Namootni baayyeen warra mana hidhaa akka Qilinxoo keessa jiran nuuf haa hiikaman jedhanii mataa qabatanii yaroo watwaatan ni agarra. Yoo mana hidhaa xiqqoo sana keessaa bahan essa deemuu? Mana hidhaa isaa guddaa Oromiyaa itti darbu. Kan hubatamuu qabu amma sirni Impaayeera Itoophiyaa jiru uummata Oromoo hundatu mana hidhaa keessa jira. Uummata Oromoo mana hidhaa keessa baasuuf Impaayeera Itoophiyaa diiguu qabna.
Mee bakka ittis bineesa(zoo)tiksan ilaala. Warra akka Leencaa sodaachisaa tahan qophaatti isaan kahan. Warri mana hidhaa xixxiqqoo akka Qilinxoo, Qaalitii, Alem Baqaanyi deeman warra sodataman akka tahe hubachuu qaba. Dhali Oromoo mana hidhaa xiqqoo keessas tahe mana hidhaa Oromiyaa baldhoo keessa jiru seerri ajjeessamuu irraa dhowwu hin jiru. Kanaafuu guyya Uummatni Oromoo garbummaa Sirna Nafxaanyaa jalatti kufee kaase amma guyyaa har’aa hireen isaa dhiitamuu, hidhamuu, gidirfamuu, gudeedamuu, ajjeefamuu fi saamamuu tahee itt fufee jira.
Sirni Impaayeera Itophiyaa utube qabee jiru sirna Nafxanyaa jennu dha. Sirni Nafxanyaa gaafaa fi gurraa ittiin of agarsiisu hin qabu, hojiin of mul’isa malee. Hojiin isaa Sirna Impayeera Itophiyaa tiksuu dha. Namni Sirna kana leelisu hunduu itti mataa tahuu ni danda’a. Impaayeera Itophiyaa tiksuu keessatii gahaa guddaa qaban Oromoota akka tahe hin dubbatama. Isaan garuu akka Oromoo itti utuu hin taane Amhaaraa of fakkeesanii jiraachaa turan.
Konoonel Abiyi waan sirna kana leelisuuf malee kennaa gara biraa hin qabu. Inni haati koo mootii torbaffaa taata naan jette jirti jedhu hunduu abajuu dha. Yaroo amma kana keessatti Konoonel Abiyii marsee kan jiru tortortootaa hawwii sirna nafxanyaa deebisuuf jojjobi’aa jiran akka tahe argaa jirra. Uummatni bal’aan Amhaaraa Konoonel Abiyiin gargaaruu fi hordofuu hin qabu.Waan isaaniif dhaabbate fakkeesse uumatoota olla isaanii wajjin walitti isaan naqee isaan ficcisisuuf deemaa.
Konoonel Abiyi maqaa Sirna Impaayeera Itoophiyaa tiksuun abjuu dheebuu aangoo qabu guutachuu fiigaa jira. Namni kun yaaoo uummatni biyya Sanaa kumaatamaan qee’ee isaa irraa buqaa’ee bakka seenu dhabu, yaroo kumaatamni hedduun bishaaniin nyaatamu, yaroo uummatni beelaan dhumuu fi sababa adda addaan gurmuun ajjeefamuu uummta biratti argumuu irra bakka waan isa gammachiisu dowwachuu filata. Konoonel Abiyii aangoo isaa irraa kan hafee biyyi ishee iyyuu halkan tokkotti yoo lafa irraa dugugamtee bade dhima isaa miti.
Namicha hattuu fi sobduu kana harkatti Waaqayyo maaliifa akka uummata kana kuffise nama hin galu. Namni kun waan galgala kana sobe borus irra deebisee sobuu irra soba biraan as baha. Utuu akka inni sobu beekani warra taa’ee harka isaa rukkutan cubbamtootaa isaa olii akka tahan hubachuu qabu. Warri isa wajjin hoojjetan hunduu yakkamtoota beekaa biyyaa fi uummata isaanii irratti yakka hojjetan waan taheef gaaf tokko itti gaafatamuuf ta’uu.
Namni kun maraatee jira. Maaliif biyyi taa’ee akka isa ilaalu naaf hin galu. Namni aangoo ol aanaa biyyi itti tahee fi ajajaa RIB tahe tokko humna waraanaa fi poolisii nama horii milliona tokkoof walkaa ol qabu saamaa fudhaa jechuun dogongora miti. Utuu biyyi sun seeraa fi heerri kan bulu tahe badii aangoo isa darbu qabu dha. Yaadoon koo inni guddaan aangoo yoo isa harkaa bahuuf jedhe humna waraanaa isaa kana kan nama tahee socho’u hundaa ajjeessaa jechuu irraa hin dhaabbatu. Kanaafuu uummatni Oromoo sanyiin isaa utuu lafa irraa dugugamee hin badiin of qopheessuu qaba. Waraanni isaa qabaaenya uummata kan akka TV. Warqii, maallaqaa fi dunkaana cabsee waan argate akka ifatti saamuu eegalee oduun deemaa jiru ifa godhee jira.
OPDOn akka shaarmuxaa nyaara haadattee of kuulaa ooltu ODP yokaan, PP yoo ofiin jette OPDO dhuma ishee ganamaa Waayanee jalatti nu adamsaa fi admsiisaa, nu waxalaa fi waxxalshiisaa, nu hidhaa fi hisisaa, nu ajjeesaa fi ajeesisa, nu saamaa fi saamsisaa ture. Karaa tokko Waayanee of irratti sodaachaa turte jalaa baatee akka gangee takalaa kutatee lafti na hin gahiin jechaa jirti. Karaa biraa warra yaada Oromummaa qaban of keessa mulqitee baaftee ilmaan nafxanyaa fi Diqaalota Habashaan dhufatamte jirti. Diqaaltonni Habshaan aangoo OPDO dhunfatanii Uummata Oromoo irratti dugugaa sanyii deemsisaa jira.
Kan dhaai’ma, jartii, jaarsa, maatii guutuu, dubartii ulfaa ajjeessuu fi ajeesisu warra kana. Hammeenyi ilmaan Oromoo ajjeessanii dagala keessatti akka bineensi nyaatuu gochuu, mana wajjin gubuun, ajjeessanii qaama irraa ciruun isaa dhufa? OPDO keessa iyyuu warra uuman diina Uummata Oromoo tahetu PP of mogaasee ittiin nama gowwomsuu yaada. PP waan jedhamu hin jiru. Kan jiru OPDO dha. Konoonel Abiyi gaafa aangoo qabute” shorkokeessaan mootummaa keenya, kaan qeensa buqisaa, cinaan tumaa, harkaa fi miila kutaa ture” jechuun isaa dhugaa ture. Har’as kunoo muxxannoo qaban sanatti akka deebi’an hojjechaa jiran ijaan argaa jirra.
“Nama ajjeessuun mo’amuu” jechaa Haacaaluu kan ajjeesse Mootummaa Abiyi akka tahe ifaa dha. Sababni isaa inni duraa Haacaaluu dhabamsiisu miti. Sababni isaa inni dura hawwi Haacaaluun bilisummaa Uummata Oromoo qabu dhabamsiisuu dha. Goota ilmaa Oromoo bilisummaa Oromoof gahaa olaana qabu ajjeesanii sababa du’aa isaan immoo hoogantoota hidhaattti guuranii dhabamsiisuuf yaaluun tilmaaman itti yaadamee kan hoojjetame akka tahee raga dha. Jaalltamaa Goota Oromoo wareegameef kan hidhamu ilmaan Oromoo tahun baayyee fuggisoo dha. Sirni nafxanyaa dhiiga keenya dhangalaase dhiiga keenya dhangala’een lafa irraa haxxaa’ee nu balleessuu deemaa jira.
Namichi kaleesa filmaata sodaate ilmaan Oromoo kumaatama heedduun mana hidhaatti xaxee dhafee filannoo gochuuf muddamaa jira. Kun hunduu tuffii Uummata Oromoof qabu agarsisa. Uummatni Oromoo yoo baayyate ilmaan isaaf guyyaa torba boo’ee garaa kutatee galee rafa akkuma jedhan tahaa jirra. Ani du’a Haacaaluu booda Uummatni Oromoo sidaa Minilki sana utuu hin jigsiin manatti deebi’ee gala jedhee hin yaadne. Haacaaluu booda Oromoo dhiba meeqatu du’e. Tokko tokkoon nuuf dhufaa jira.Teenyee eegachuu irra of irratti loluu hin wayyu?.
Rakkinni keenya waan goonu dha walaalaa jirra. Akka du’aa jirru beekna. Duuni illee akka kabjaa qabu beeku qabna. Diinaaf jilbeefatnii du’uun fokkisaa dha. Du’a keenya bareechuu yoo barbaanni of irratti lolachaa du’uu qabna. Diinni keenya isa nuuf hilu miti. Oromoo tahuun qofa nama ajjeesisa. Kanfaauu diinni keenya duraa basaastuu, dabballee fi kaabinee OPDO nu keessa jirtu akka taate hubannee maatii ishee wajjin haleeluu fi qabeenya ishee barbadeessuu qabna. RIB fi poolisii Konoonel Abiyi WBOf haa dhiifnu. Nuyi warra nu keessa jirtuuf gadneef fi yookan sodaanee of cinatti yoo dhiifne boru kan nu balleessu warra kana. Warra Konoonel Abiyi jala kaatu kana cirree balleessuuf, humnaa fi daneetii ni qabna. Biyya mootummaan uummata shorkokeessaa jiru keessatti karaa nagaa ni qabsoofna jechuun haalan dhugaa irraa fagoo jira. Haalli qabsoo karaa nagaa godhan hin jiru. Tooftaa adda addan qabeenyaa fi humna diina laamsheesuun barbaachisaa dha. Karaa nagaa qabsoofna jedhanii uummata karaa itti baasanii ficcisiisuun barbaachisaa natti fakkaatu.
Gadan Gadaa Bilisummat Ti?